Idethi yokukhishwa kwe-Dave Season 3: Cast, Plot & Updates! - Ukuzijabulisa
Isizini 3 ka-Dave - Kuze kube manje, Kuhle Kakhulu!
Ithini idethi yokukhishwa kuka-Dave Season 3?
Bangaki abalingisi abazovela kuSizini 3 sika-Dave?
Sikuphi manje kuSizini Sesithathu sikaDave?
Ukuphila kukaLil Dicky kokuthandana noDave Star
I-Hypospadias, i-hypospadias, ne-hip hop: utholani uma uhlanganisa zonke ezintathu?
Lil Dickykubonakala kuwukuzwakala okusha kwe-rap okuvela ekujaheni kwakamuva kwabaculi abasha.
Umrepha walandela indlela efanayo yodumo njengabantu abaningi besikhathi sakhe. Izingoma zakhe eziningi zibonwe izikhathi ezingaphezu kwesigidi ku-YouTube. Akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi abe ngundabamlonyeni ngenxa yokulethwa kwakhe okungalindelekile kanye nezinhlamvu ezihlekisayo.
Nakuba engazange abe manqikanqika ngokudalula imininingwane mayelana nokukhuliswa kwakhe kanye nokukhathazeka kwezempilo emculweni wakhe, uchungechunge lwakhe lwe-smash FXX uDave lwamvumela ukuba avule nakakhulu abalandeli bakhe.
Lil Dickyuveza inguqulo eqanjiwe yakhe ohlelweni, enikeza abalandeli amazwibela okuthi ukhuphuke kanjani waba ngomunye wabaculi be-rapper abafunwa kakhulu emdlalweni njengamanje. Kodwa-ke, sizimisele ukuqagela ukuthi ukuxoxa no-Doja Cat ngezinhlelo zokusebenza zokuphola kungase kumvumele indlela yokudala.
I-FX Networks ayikakaqinisekisi ukuthi isizini yesithathu isemisebenzini, kodwa kubonakala sengathi kuzoba neziqephu eziningi ezizayo. Nokho, izibalo zokusakaza zeSizini 1 zibe yimpumelelo enkulu (nge-Variety). Kuze kube manje, okulandelayo yikho konke esikwaziyo ngakhoDave Isizini 3.
Funda kabanzi: I-Atlanta Isizini 3 - Usuku Lokukhishwa: Kuqinisekisiwe noma Kukhanseliwe?
Isizini 3 kaDavekusamele kuqinisekiswe ngokusemthethweni, ngakho-ke akunakwenzeka ukusho ukuthi singalindela nini le sethi yeziqephu ezingaba khona. Kunoma yikuphi, sisesimweni sokwenza ukuqagela okufundile.
NgoMashi 2020, kwasakazwa isiqephu sokuqala seSizini 1. Njengokulindelekile, ubhubhane lwe-COVID-19 lwaluqhubeka ngaleso sikhathi, futhi kungenzeka kube khona umshoshaphansi ekuqaliseni ukulandela ngenxa yokuvalwa kwezikhala okukhulu. Ihlobo lika-2021 libone isizini yesibili yombukiso wokuqala. Ngegebe lezinyanga eziyi-15 phakathi kwezinkathi zonyaka, singase silinganisele lokhoIsizini 3 izokhonjiswa okokuqala ngo-Agasti noma ngoSepthemba ka-2022.
Inqobo nje uma ubhubhane lungabangeli ukubambezeleka okukhulu, amakhamera angaqala ukuqoshwa ngokushesha kunalokho obekulindelwe. Kungenzeka ukuthi izokhishwa ngesikhathi esifanayo nango-2021. Ukuze ubone okuningi kwamahlaya ka-Looper ahlukumeza inhliziyo, kuzodingeka uqhubeke uhlola.
Abalandeli bangase balindele ukubona abalingisi abaningi abafanayo bebuya isizini yesithathu. U-Dave Burd (u-Lil Dicky ngokwakhe) ubuya ukuzodlala inguqulo egcwele izinzwa, egxile kakhulu ekudumeni komuntu wakhe wangempela, ohlanganisa umlingisi wesihloko.
Ukuze amsize, kufanele abe noGaTa (Davionte Ganter), indoda yakhe yesandla sokudla, kanye noMike, Ally, Emma, ​​no-Elz (Andrea Santino, Taylor Misiak, Christine Ko) (Travis Taco Bennett).
Uma kukhulunywa ngokubonakala kwesizini yokuqala, uLil Dicky unekhono lokuthola amagama amakhulu azovela. UMacklemore, Justin Bieber, Kendall Jenner, no-Hailey Baldwin bayidlanzana lezinkanyezi esizibone kumasizini amabili okuqala.
Manje njengoba lolu hlelo selusesizini yalo yesithathu, ubani owaziyo ukuthi hlobo luni lwama-megastar azokwazi ukuwaheha? Sisanethemba lokuthi uDrake angase abonakale kwenye yamafilimu ethu.
Izinto ezimbili zacaciswa ekupheleni kwesizini yesibili kaDave. U-Ally, owayeyintombi yakhe, manje usejola nomunye umuntu. Okwesibili, uDave ubonakala ejabule ngokwengqondo, kungathi akanankinga nokuthi i-albhamu yakhe ibingeyona ingoma eshisa izikhotha emhlabeni wonke. Kuze kube yilapho ebuya, ujabulela ukuvakasha nabangane bakhe.
Kunethuba elihle lokuthi Isizini 3 izongena ijule emithelela yalezi zinto ezimbili ezintsha ezitholakele. Ngemva kokuhlukana no-Ally ku-Season 1, u-Dave wenze umzamo wokuba umngane naye ku-Season 2. Akucaci ukuthi u-Dave uzophendula kanjani manje njengoba eqhubekele phambili (futhi kubonakala sengathi ubucayi).
Mayelana nekusasa lakhe lomsebenzi, uDave unamasu amaningi okufanele awenze. Ngaphezu kokucabanga nge-albhamu yakhe yesibili, ubamba iqhaza elikhulu emsebenzini we-rap we-GaTa. Ngokuhamba kwesikhathi, kungenzeka ukuthi angadlula uDave njengomuntu obaluleke kakhulu enhlanganweni.
I-Dave Season 3 inento eyodwa esingasho ngokuqinisekile. Amahlaya amaningi epipi azovela.
Ukuphila kukaLil Dicky Ukuthandana noDave Star
Isihlabani somdlalo wamahlaya u-Dave uLil Dicky, odlala indawo kaDavid, ube nempilo yothando emibalabala. Ngizizwa sengathi ngizoba seqophelweni eliphezulu empilweni yami ngineminyaka engu-35, umlingisi nomrepha basho engxoxweni ngo-2016. Kungenzeka ukuthi ngisanda kuhlangana nothando lwempilo yami, futhi lokho kubaluleke kakhulu. Lokho kuzonginika injabulo enkulu.
Uma kuziwa empilweni yakhe yothando, umlingisi uthanda ukugcina izinto kancane ngaphansi. Akusona isizathu kuphela sokuthi kungani kungakaze kube nemibiko yakamuva yokubandakanyeka kuka-Dicky kwezothando: Ukwengeza, izingosi zezokuxhumana zika-Dicky zembula ukuthi cishe akanakunamathiselwe futhi ugxile kuphela emsebenzini wakhe njengomculi kulezi zinsuku.